104 ~ 178 $
DATA CABLE, GIGALAN U/UTP CAT 6, 23AWGx4P, CMR, P/N: 23400066 (Indoor): USD104 DATA CABLE, GIGALAN F/UTP CAT 6A, 23AWGx4P, CMR, P/N: 23370022 (Indoor): USD178
PUMA 5Hp Oil Free Air Compressor
3.7kW or5Hp Heavy Duty Induction Motor3Phase 415V 50 Hz ( recommend 32 Amps Isolator ) Air Displacment : 740 liter per min or 26 cfm Motor Speed : 860 rpm No. of Cylinders :2( V series ) Air Receievr comes with Manufacturing Certification recognized by MOM.
Top Mounted Cantabric Filter AS-15780
Features &amp; Benefits: Top Mounted multiport valve. Threaded filter locking ring in ABS. 9000 1/h0500 mm outlet 1 1/2&quot; 14000 1/h0600 mm outlet 1 1/2&quot; 21000 1/h0750 mm outlet 1 1/2&quot; 21000 1/h0750 mm outlet 2&quot;
The product has been widely used in places with high fireproof &amp; explosionproof requirements, such as power transmission and transformation system, commercial street, sport stadium, petrochemical enterprise, metro, railway station, airport and etc.
300 VA Inverter & Voltage Regulator
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;">Space Light co,Ltd မှဖြန့်ချီသော333 အမှတ်တံဆိပ်Energy Brand&amp;nbsp; ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Space Light Co.Ltd သည်ကောင်းမွန်၍ အရည်သွေးမြင့်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို သာအသုံးပြူထားပါသည်။ Warranty (5) year ပေးထားပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အမြိူ့မြိူ့အနယ်နယ်ဆိုင်များသို့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ချီခဲ့သည်မှာ(၁၅)နှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်</span><br></p>
Power Cables &amp; Network Cables
20000 ~ 25000 $
We have full range of products for Power Cables and Data Cables and kindly call us or send email to us.
for Fiat Grande Punto / Alfa Romeo 159 3.5mm jack plug aux input adaptor for any MP3 portable music player that hasaheadphone socket.Suitable for the following vehicles:for Alfa Romeo 159 (models 2007 onwards)*for Fiat Grande Punto (models 2007 onwards)* *head units with &quot;AUX&quot; function.This item is NOT compatible with •stereos that have the6CD Player built into the stereo.Stereos with the &#039;Blue&amp;Me&#039; Bluetooth audio streaming feature As this adaptor plugs directly into the car radio, there is no loss of sound quality such as that experienced withaFM Modulator type of adaptor. အရည်အသွေးမှာအထူးကောင်းမွန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအရှိဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ကေဘယ်လ်ကြိုးအမျို၊းမျိုး၊ ဝါယာကြိုးအမျိုးမျိုး တို့ကို ဝယ်ယူအားပေးလိုသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် ကျွန်တော်များ Golden Brothers Electrical Wires &amp; Cable တွင် ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
AC Contactor 3SC8
3SC8 AC contactor is suitable for using in the circuits of AC 50Hz or 60Hz, rated insulating voltage 660V,rated operating voltage up to 690V,rated operating voltage 380/400V in AC-3 type, rated operating current up to 95A, for making, breaking , frequently starting &amp;controlling the AC motor.Combined with the auxiliary contact block, timer delay &amp;mechanical interlocking device etc, it becomes the delay contactor, mechanical interlocking contactor, star-delta starter.With the thermal relay, it is combined into the electromagnetic starter.The contactor is produced according to IEC 60947-4. အရည်အသွေးပြည့်စံချိန်စံညွှန်းအပြည့်ထုတ်လုပ်ထားသော AC Contactors များကို လူကြီးမင်းတို့၏ Electricals Installations ၊ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုရန် အထူးသင့်လျော်ပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေပါသည်။ တပ်ဆင်ဝယ်ယူအားပေးလိုပါက ကျွန်တော်များ Myanmar Power Spectrum Co.,Ltd တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင် ရှိပြီး ပါးလွှာသော LCD နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လုံခြုံရေးသုံး Walk Thruogh Dector တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြုတ်တပ်ရတာ အဆင်ပြေစေပြီး သယ်ယူရတာလည်း ပေါ့ပါးလွယ်ကူစေသည်။ ကွန်ပျူတာ ဒီဂျစ်တယ်ထိမ်းချူပ်မှု စနစ်ဖြင့် အများဆုံး တံခါး၂၀ ကို ထိန်းချူပ်နိုင်သည်။ Alarm အမြင့်၊ အနိမ့် နှင့် Mute mode တို့ပြုလုပ်နိုင်ပြီး လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ချိန်ညှိအသုံးပြုနိုင်သည်။ လုံခြုံရေးစနစ်ကောင်းမွန်စေရေး နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်စေရန် နေရာတကာအသုံးပြုနေကြသော လုံခြုံရေး စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားများ၊ အစိုးရအဆောက်အအုံများ၊ ရှော့ပင်းမောများနှင့် အဆင့်မြင့် ကွန်ဒို နေရာများ တွင် အများပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက် တစ်တောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်ကူညီပေးသော စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ပါ။ အန္တာရာယ်ဖြစ်စေတက်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ ကိုင်ဆောင် လျှိူဝှက်ပါလာခဲ့ရင် Auto Sensor ပါရှိပြီး ကွန်ပျူတာကတစ်ဆင့် မြင်နိုင်ကြားနိုင်သည်။ ခေတ်မှီသော နည်းပညာများဖြင့် ဒီဂျစ်တယ် စနစ်ကို အသုံးပြုကာ ကွန်ပျူတာနှင့် အဆင့်မြင့်ထိန်းချူပ်ရေး စနစ်များပါဝင်သည်။ Remote control စနစ်လည်းပါဝင်သည်။
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကေဘယ်နှင့် ဝါယာကြိုးအမျိူးအစား စုံစုံလင်လင်ကို ကျွန်တော်တို့ Company မှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါတယ် ခင်ဗျာ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို တစ်နေရာထဲပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိနေပါပြီ။ အရည်အသွေးကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး လူကြိုက်များသော Brand အမျိူးအစားတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တာ နှစ်တစ်ချို့ရှိပါပြီ။ သင့်အိမ်လုံခြုံရေးနှင့် လျပ်စစ်မီးလုံခြုံရေးအတွက် အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ပစ္စည်းများကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်သော ပစ္စည်းမျိူးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချ ဘေးကင်းနိုင်ပြီး ပြုပြင်စရာစရိတ်စခများ အပိုကုန်ကျစရာ မလိုအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
MINI BATTERY CHARGER WITH ADAPTOR
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;">Space Light co,Ltd မှဖြန့်ချီသော333 အမှတ်တံဆိပ်Energy Brand&nbsp; ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Space Light Co.Ltd သည်ကောင်းမွန်၍ အရည်သွေးမြင့်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို သာအသုံးပြူထားပါသည်။ Warranty (5) year ပေးထားပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အမြိူ့မြိူ့အနယ်နယ်ဆိုင်များသို့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ချီခဲ့သည်မှာ(၁၅)နှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်</span><br></p>
200 ~ 1000 $
Steel PE composite PSP sheath could guarantee moisture-proof performance and improve the cable’s performance to resist crush strength; Figure-8 self-supporting structure presents high tensile strength and enables easy and cost saving aerial installation; Excellent mechanical and temperature performance guaranteed by the accurate excess fiber length and proper design; Scientific, rigorous process and raw material control ensure more than 30years of working life oft he cable;
လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များကာကွယ်ရန် CHINT N13200 Air Circuit Breaker
လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ Power station ဌာနများ၊ အဆင့်မြင့်အဆောက်အဦးများ တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် NA1 Sereies circuit breaker များကို Multifunction protection Microprocessor controllers များနဲ့ အခြေခံပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊ circuits များကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို လျှပ်စစ် ဝန်ပိုခြင်းမှ ဟန့်တားပေးခြင်း၊ ဗို့အား အတက်အကျ တို့မှ ဟန်တားပေးခြင်းတို့ကို စွမ်းဆောင်ပြုလုပ် တားဆီးပေးပါသည်။ intelligentized နှင့် selective protection functions များပါဝင်သောကြောင့် Power supply အတွက် အထူးကောင်းမွန်ခြင်းသလို မလိုအပ်သော power failure တို့မှလည်း တားဆီးပေးပါသည်။ ဆက်သွယ်မှာယူလိုသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် email (သို့မဟုတ်) Chat Box တို့မှ တဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Myan Lann ဝါယာကြိုးများသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အကောင်းဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး ဝါယာကြိုးများ ဖြစ်ပါသည်။အိမ်သုံး၊စက်ရုံသုံး၊ရုံးသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို လူကြီးမင်းများစိတ်တိုင်းကျ ကျွန်တော်များ Myan Lann Wire &amp; Cable များကို ချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် လူကြီးမင်းများစိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Myan Lann Wire &amp; Cable Co.,Ltd သို့ တိုက်ရီုက်စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။